Ma lagaa yaabaa in Madaxweyne Waare uu Wakaaladdii Maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo Wasaaradda A. Gudaha ? - Jowhar Somali news Leader
Home News Ma lagaa yaabaa in Madaxweyne Waare uu Wakaaladdii Maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo...
Ma lagaa yaabaa in Madaxweyne Waare uu Wakaaladdii Maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo Wasaaradda A. Gudaha ?
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya inuu socdo qorshe ku aadan sidii Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu wakaaladdii ama Mas’uuliyaddii howsha Maamul Dhisidda Hirshabeelle ugu wareejin lahaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya.
Qorshahan ayaa ahaa mid maalmihii la soo dhaafay soo xoogeysanayay, waxaana jiray kulamo dhacay oo looga arrinsaday, balse aan weli is afgarad laga gaarin.
Dowladda Federaalka ayaa qorsheyneysa in door weyn ku yeelato howsha dhismaha maamul goboleedkii labaad, marka laga soo dhamaado Galmudug oo howshiisa gabogabo maraya.
Tallaabadan ayay dowladdu u qaadeysaa, sidii Musharax ay wadato ugu soo saari laheyd Madaxtinimada Hirshabeelle, si ay danaheeda ugu fushato Doorashada 2021 ee Federaalka, gaar ahaan Xildhibaannada ka imaanaya.
Waxaa socda kulamo is afgarad looga gaarayo arrimahan oo ay qeyb ka yihiin Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Hirshabeelle, waxaana haddii qorshahan guuleysto la filayaa in bisha Shanaad ee sanadkan 2020 uu bilowdo howsha Maamul u saameynta Hirshabeelle oo la doonayo in loo maro sidii Galmudug oo kale oo howsheeda bilow laga soo bilaabay.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in is afgaradka uu hadda meel dhexe marayo, lagana wada hadlayo oo kaliya xilliga la shaacin doono heshiiska rasmiga ah.
Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa muddo xileedkiisu ka dhiman yahay 8 bilood.
Qorshahan ayaa la mid ah kii Madaxweyne Xaaf lala galay bishii July ee sanadkii hore 2019, oo wakaaladdii howsha Dhismaha Galmudug ku wareejiyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, balse dhowaan sheegay inuu ka laabtay, xilli aanay wax faro ugu jirin.
Inkastoo Dastuurka KMG qodobkiisa 120 uu dhigayo in dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda Federaalka uu yahay arrimo lagu nidaaminayo dastuurada maamul goboleedyada.
Hase ahaatee dowladda Federaalka, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa si weyn ugu lug laheyd dhismaha saddexda maamul goboleed, sida Koofur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo ay haatan socoto sidii dowladdu ula wareegi laheyd howsha maamul dhisidda, balse waxaa ay dowladdu ku guuldareystay inay door ku yeelato doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo Puntland, isla markaana si iskood oo ka madax bannaan dowladda Federaalka u qabsaday.
Si kastaba ha ahaatee waxaa dhowaan dalka uu geli doonaa waqti kala guur ah, iyadoo dowladda Federaalka muddo xileedkeeda uga harsan yahay muddo sanad ah, isla markaana maamul goboleedyada laga soo dooran doono Xildhibaannada labada Aqal ee ku matalaya dowladda Federaalka.
Xisbiga Wadajir oo soo dhoweeyay ansixintii Heshiiska Hannaanka Doorashada
Madaxweynaha Galmdug oo gaaray magaalada Cadaado